Ukuze u-Aries abize umtshato wabo ulungelelaniso, baya kuthi baqeshwe umyinge we-toastmaster, kwaye ngokugqithiseleyo-ukumema njengentengiso yokutshabalalisa yonke ikampu ye-gypsy. Kuya kuba nzima kubo ukuba baphile omnye wemikhosi ephilileyo ebomini ngaphandle kwezithethe ezifanelekileyo, imincintiswano enemihlali kunye neentloni ezinomdla. I-Ary Aries ayiyi kuvuma ukulahla uluhlu lweemfuno emtshatweni wakhe "umgibeli", kodwa kusenokwenzeka ukufumana ingxaki kunye naye, ukuba, ngokomzekelo, ukumthembisa kuye esikhundleni sokubhiyozela umkhosi othakazelisayo umtshato owenza isixazululo sokungahambi kakuhle.
I-Taurus ibona umtshato wabo uthobekile kwaye uhlonishwa ngexesha elifanayo. Njengoko kunjalo, bawazi kuphela. I-Taurus ilungele ukuyigcina kwinani leendwendwe, elikhokelwa ngesiqubulo esithi: "Akukho nto ingcono". Lo bulumko basebenza ekukhethweni kwazo zonke iimpawu zomtshato, bakhetha izitya ezifanelekileyo, izitya ezixabisekileyo kunye neendawo zangaphakathi zobukhosi. Akunjalo bonke abahlobo kunye nezihlobo ziya kuhamba ngomtshato eTaurus. Nangona kunjalo, abo banenhlanhla ngokwaneleyo ukuba bathathe inxaxheba kulo mbhiyozo obhiyozayo abayi kuze bayikhohlwe.
Umtshato Gemini - kungekhona nje umbhiyozo, yinto yokusebenza yomdlalo wonke. Amawele, nangona ehlonipha izithethe, kodwa esaziqwalasela njengento yokudlulela kwithuba elidlulileyo kunye nangomngcipheko wecala, okwenza yonke imitshato ibe ngumthendeleko wethemplate. Ngoko ke, bafuna iingcamango ezintsha zomtshato wabo, balungiselela iiholide zangaphambili kunye nezifundo ezahlukahlukeneyo, izitayela, iifiki, abalinganiswa. Kwaye ukuba ngenxa yesizathu esithile akunakwenzeka ukulungiselela umtshato onjalo, omnye ke akayidingi isipho kubo.
Ixabiso eliphambili emtshatweni weCancer kufanele kube yinto yokugcina izithethe, ngelixa ezo zidlulileyo zisuka kwisizukulwana ngesizukulwana. Umtshakazi walo mqondiso unokushiya kalula iindwangu zemitshato ezithengi kakhulu kunye nezakhelo, ukukhetha ukugqoka umtshato. Kwaye umyeni-I-Cancer iya kuqwalasela ubunzima beentsapho njengesipho esihle kakhulu somfazi omtsha. Umtshato omuhle uRaki uya kubizwa xa zonke iindane ziqokelela kwitafile enye. Kwaye isipho esona sihle kunazo zonke abantu abasandula kutshata-uRakov uya kuba ngumthi wesi-generic kunye nezithombe zookhokho.
Umtshato wakhe omhle, ininzi uLviv, eqinisweni, iya kulungiswa ngendlela yobukhosi, kunye nesidlo esinomdla. Iindwendwe ezidumileyo kwaye akukho zihlandlo eziphambili ezihamba phambili ziya kuhamba ngomtshato kaLeo. Ngenxa yezinto ezikhunjulwayo, uLoo ngokwakhe ulungele ukungabi nxaxheba kuphela kulo mbhiyozo, kodwa nokuba uthathe inxaxheba yendima yomphathi wesigqeba. Kodwa yintoni enye? Ingonyama ifanele ifakwe emtshatweni wayo ukuze kupheliswe yonke into ebonwa yiindwendwe zomtshato. Ngaloo mbhiyozo, akayi kubakho imali, akukho xesha, akukho mphefumlo. Imithetho iya kuba malunga nale mtshato.
Abafazi abancinci kakhulu bafunyanwa kwii-Women's Dev, ama-bride agqithiseleyo avela kuma-Dev amadoda. Ngoko ke, umtshato apho ubuncinane bodwa abasandul 'ukutshata iVirgo baya kuba yinto efanelekileyo, ubuncinane kwiDevs ngokwabo. Nangona kusekho nabani na ofumanayo, kwinto enokuthiwa yintlangano kunye nokulungiselelwa komtshato. Ukubhiyozelwa, okunokwenzeka, kuya kuba mncinci, kodwa kucocekile kwaye kuyinyanisekileyo. U-Stingy Virgo, mhlawumbi, uya kubandakanya uqoqosho lwakhe oludumileyo, kodwa oku akukuchaphazela umgangatho weso siganeko.
I-taste ye-Libra iya kubavumela ukuba bahlele umtshato onjalo, ongayi kuba neentloni ukubonisa ngisho nabagxeki abanomdla. Ekulungiseleleni ukubhiyozelwa kweLibra iya kuqwalasela zonke iinkcukacha, ukusuka kwiingubo ukuya kwiipatheni kwiitya, eziza kugutywa ngetafile yomtshato. Imiba ebalulekileyo kwimiba ebalulekileyo ayikho. Ngamanye amaxesha ukucwiliswa kwiinkcukacha kubangelwa kwaye kudideka rhoqo ukungaqiniseki iLibra, ngoko kungcono ukuba bangagxininisi kumququzeleli wale mibhiyozo, ukwenzela ukuba imitshato yomtshato ihlelwe ngumqeqeshi.
I-Scorpions ikholelwa ukuba umtshato kufuneka ukhunjulwe ngabaninzi abasanda kutshata njengendwendwe. Baye basasaza, kwaye banokutshintsha lula umtshato wabo kwimiboniso engabonakaliyo. I-Scorpions iya kunxunguba ukuba zonke iindwendwe ziza kuthatha inxaxheba kwiholide, zilungiselele wonke umntu umangaliso-izipho, iimincintiswano ezithakazelisayo kunye namahlaya ajabisayo. Ukuzonwabisa kwabo kumtshato ococekileyo, baya kuwufumana kwisigxina - umdaniso wokutshata wokuqala.
Ukuba nomoya wayo, umoya we-Sagittarius awuyi kuvumela ukuba umtshato umtshato oncomekayo ngumnye umzali okanye mhlawumbi umphathi wezobugcisa. Baqinisekile ukuba akukho mntu unokuqonda nokuvakalelwa ngumtshato onjani. Kulo mbhiyozo wobomi, bonke abantu abaqhelekileyo kwiSagittarius baya kuba khona, kodwa ngamnye wabo uya kuziva unendwendwe ebiza kakhulu. Ukususela emtshatweni we-Sagittarius, wonke umntu ngaphandle kwekhefu kufuneka ashiye umxholo kunye nomxholo. Kuphela ke uya kuthiwa ilungile.
I-Capricorns ngokubanzi bayenqaba ukutshata ukuba kufuneka babhiyozele umtshato kwintsapho elinezolileyo. Kwabo, umtshato uninzi, iindwendwe ezininzi, ukuzonwabisa okumnandi kunye nomthendeleko oqaqambileyo kunye nomthendeleko ombala, ukudibana kunye nokulwa. Into ephambili kukuba zonke iimpawu zomtshato ziyadibana. I-Capricorns idla ngokukholelwa ekukholweni, kwaye umtshato, ogcinwe ngokuvumelana nazo zonke izithethe ezisisiseko, uphawu oluhle lokwenene kunye nesibambiso sokuphila kwentsapho yolonwabo.
Abase-Aquariya bancike kakhulu kwimbono yoluntu, ngoko ke, ukulungiselela umtshato, abayi kuphinda bathe bhekise ngokuthanda kwabo, kodwa kwiindwendwe kunye nabo baya kufumana le mtshato baya kuthi. Baya kungena kwiityala, bathengise indlu okanye imoto, kodwa ukubhiyozelwa kuya kubanjelwa ngendlela engayi kuba yimbi kunabantu. Izivakashi ezivela kule nto ziya kuzuza kuphela. Ngamnye wabo uya kuba nomdla kumdla wokutya, ukukhethwa komculo kunye nezinye iinkcukacha eziza kudala umoya opheleleyo umtshato opheleleyo.
Umtshato ogqibeleleyo wePisces ngumzekelo wokuthandana novelwano. Iholide yokuqala yokubambisana ayinakuyenza ngaphandle kweepalals ze roses, amajuba, izibane eziqaliswe esibhakabhakeni, umdaniso wokuqala ochaphazelayo kunye nolwandle lwangqumbo. Nangona emtshatweni baya kuzama ukumema kuphela izibini ezithandanayo, ukuqinisa amandla omthando kunye nothando. Ukuba awukwazi ukuququzelela umtshato onjalo, ngoko njengendlela efanelekileyo, baya kukhetha i-honeymoon kwindawo enothando kakhulu.
Ubudlelwane phakathi kwabatshatileyo emva komtshato
Imitshato engavamile kwihlabathi
Umtshato kwimbala eluhlaza okwesibhakabhaka: ukubhiyozela kwasezulwini
Lilixesha elingcono lokudlala umtshato?
Luphi uhlobo lwesilwanyana ukuthenga umntwana?
Ukutya komntwana ngomnyaka owodwa
UVictoria Bonya ngaphandle kwe-photoshop eshaywa ngumbala omtsha weenwele, ividiyo
Amacangco obomvu emzimbeni: izizathu zokubonakala, unyango
Isitya samantongomane ngosuku sisisitshixo kwimpilo ende kunye nobomi.